Farqiga ereyo la isku khaldo: (Magacaabis/Doorasho, Dakhli/kharash, dowlad/xukuumad, mushaar/gunno) | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA Farqiga ereyo la isku khaldo: (Magacaabis/Doorasho, Dakhli/kharash, dowlad/xukuumad, mushaar/gunno)
Magacaabis iyo Doorasho: Magacaabis waa marka mas’uul uu xil u magacaabo mas’uul kale oo ka hooseeya. Tusaale, Ra’iisul-wasaaraha Soomaaliya lama doorto ee waxaa xilka u magacaaba Madaxweynaha. Sidoo kale wasiirrada xilka waa loo magacaabaa ee iyaguna lama doorto. Hase yeeshee doorashowaa in qofka uu ku soo baxo qaab doorasho la codeeyay. Tusaale ahaan madaxweynaha Soomaaliya waxaa doorta baarlamaanka, sidoo kale Guddoomiyaha Baarlamaanka waxaa doorta Baarlamaanka.
Dowlad iyo Xukuumad: Dowlad (State) waxa ay ka kooban tahay dhul, dad iyo xukuumad. Xukuumadwaa qeybta fulinta ee ka kooban raysal-wasaaraha iyo golihiisa wasiirrada. Inkastoo ereyadan aysan si fiican ugu kala baxsaneyn Soomaalida, haddana waxaa habboon in weriyuhu la socdo isticmaalkooda. Tusaale haddii weriyuhu doonayo inuu ka hadlo Golaha Wasiirrada oo kaliya, waxaa habboon inuu adeegsado ‘xukuumad’.
Xigasho:- Somali Wiki